“Barcelona waxay ku jirtaa xaalad adag oo jahwareer ah”… Sergio Busquets – Gool FM
(Barcelona) 27 Sab 2018. Khadka dhexe kooxda Barcelona ee Sergio Busquets ayaa muujiyay sida uu kaga walwalsan yahay guuldaradii ay xalah kala kulmeen kooxda Leganes lulankii ka tirsanaa kulamada 6-aad ee La Liga.
Kooxda Leganes ayaa guuldarao lama filaan ah dhabarka u saarisay kooxda Barcelona, taasoo ka dhigtay in kooxda reer Catalonia ay laba kulan xiriir ah iska lu misay 5 dhibcood.
Busquets ayaa ugu horeyn sheegay: “Waxaan barbaro lasoo galnay kooxda Girona, waxaan lu minay 2 dhibcood, laakiin waxaan kulankaas ku ciyaareenay kaliya 10 xidig”.
“Laakiin kulankii xalay ee Leganes ma jirin wax xidig ee ka maqnaa safkeena, kooxda waxay ahayd mid dhameystiran, sidaas daraadeed ma jiraan wax cudur daar aan u sameyn karno guuldaradan”.
Si kastaba kooxda Barcelona ayaa guuldarro 2-1 ah ka soo gaartay Leganes kulankoodii 6-aad horyaalka La Liga ee xili ciyaareedkan taasoo xaalada ku sii xumeesay kooxda Barca, kadib markii laba kulan xiriir ah ay iska lu misay 5 dhibcood.
DEG DEG: UEFA oo war ka soo saartay casaankii Cristiano Ronaldo (Ma ciyaarayaa kulanka Manchester United?)
Pogba oo ay ka lumeen Dhego DHEEMAN ah kaddib markii ay Tababarka ku dagaaleen Jose Mourinho iyo Laacibka oo BALAN QAADAY...!!